Magento vs osCommerce vs OpenCart Kuenzanisa
Chipiri, February 26, 2013 Chishanu, June 19, 2015 Douglas Karr
Global ecommerce kutengesa kuri kukura pa19% pagore uye kusiri kudzikira chero nguva munguva pfupi. Izvi infographic kubva Forix Webhu Dhizaini inofananidza matatu epuratifomu anotungamira - Magento, osCommerce uye OpenCart, kubatsira vashandisi kusarudza iyo ecommerce chikuva chingave chakanakisa kune yavo yekutengera ngoro saiti.
Iwo matatu emapuratifomu aya ari pamusoro pekupa simba pamusoro pe30% yemusika. Kunyange paine zvakawanda zvimwe sarudzo kunze uko, uchishandisa yakagamuchirwa zvakanaka ecommerce chikuva iyo ine hombe budiriro uye inotsigira nharaunda inogona kukupa iwe iwe neependero iwe yaunoda. Ndidzo dzinokurumidza kutora nzira nyowani - kungave kuri ruzha rwemashoko or nhare yekushandisa.
Tags: ecommerceecommerce kuenzanisaMagentomagento vs opencartmagento vs oscommerceopencartoscommerceoscommerce vs opencart
RAMP: Zviri nyore Zvemukati Kutumirwa Pakati peWordPress Sites
May 23, 2013 pa 2: 51 AM
Hei Douglas, uku kuenzanisa kukuru. Chandisinganzwisise i "X" @ "Magento -> Statistics". Kunyangwe iyo edhisheni yeEC inopa yakawanda mishumo, kureva dzakasiiwa ngoro, vatengesi vepamusoro, vatengi vepamusoro uye zvichingodaro.
May 23, 2013 pa 10: 27 AM
Iyo yakanaka poindi, @ google-65b2531b86017a5e6a499632b90ed9ce: disqus. Handina chokwadi chekuti ndingadai ndakave neX'd izvo, futi. Pamwe zvaingova mukuenzanisa nedzimwe ngoro.
May 24, 2013 pa 4: 41 AM
osCommerce inhoroondo, Magento mitemo yezvitoro zvikuru. OpenCart uye PrestaShop zvakanaka kune zvidiki. Ini ndakakurudzira zvakanyanya kune vese vatengi vangu kuti vatame kubva osCommerce kuenda Magento, Presta kana OpenCart. Kana iwe uri pane osCommerce - enda kumberi
Jun 24, 2013 pa 12: 18 PM
"Magento yakanaka kune makuru masiti" uye "Opencart yakanaka kune
diki ”ASI CHOKWADI
Ndakaverenga izvi mu
akawanda ezvinyorwa uye blog nyora kumusoro. Zvakaitika kwatiri zvinopesana.
saizi hombe yedhaimondi yekutengesa saiti paOpenCart neMagento. Uye ndakaona "OpenCart" inoshanda zvakanyanya.
Magento hogs mijenya yekugadzirisa server uye kweanopfuura approx. 20,000
zvigadzirwa DB indexing inoyamwa. Kune ezvitoro zvakachengetedzwa mashopu ekufunda curve yemagentoo shopu
muridzi wacho akanyanyisa kukwira .OpenCart extensions inodhura uye yakawanda.
Jan 27, 2014 pa 8: 35 AM
Zvakawanda ipapo 90% vanhu vanoziva kuti magento ari pamusoro uye kunyanya vanhu vakaita seizvi. yasara 10% haifarire iyo nekuda kwetemplet yayo. Asi zvakadaro ivo vari kuzvivandudza .. ndosaka vanhu vasara vari kufambawo kubva kune mamwe ese mapuratifomu kuenda magent.
Gumiguru 6, 2014 pa 9:48 AM
fyi yazvino vhezheni yeopencart ndeye 2.0 kwete 3.0.2.
Apr 28, 2015 pa 5: 45 AM
Kuenzanisa kukuru. Pasina mubvunzo Magento Ecommerce mhinduro iri yechokwadi yakanakisa nepo oscommerce iri yekare mhinduro imwe. Vanhu vava kutamira kune nyowani uye yakawanda effecient mhinduro.